Iindaba -E-expo China 2020 e-SHANGHAI
Njengomboniso we-Asia okhokelayo kwindalo esingqongileyo, i-IE expo i-China 2020 ibonelela ngeshishini elisebenzayo kunye nenethiwekhi yenethiwekhi yeengcali zaseTshayina nezamazwe aphesheya kwicandelo lokusingqongileyo kwaye ikhatshwa yinkqubo yokuqala yenkomfa yezobuchwephesha. Liqonga elifanelekileyo leengcali kwishishini lokusingqongileyo ukuphuhlisa ishishini, umbono wotshintshiselwano kunye nenethiwekhi.
Kunye nokunyuka kwemfuno yentengiso kunye nenkxaso enkulu kwishishini lokusingqongileyo kurhulumente wase-China, ukubakho kweshishini kushishino lokusingqongileyo e-China kukhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, IE expo China 2020 ngu "must" kubadlali bendalo ukuba batshintshisane ngezimvo kwaye baphuhlise ishishini labo eAsia.
I-China ijolise kakhulu kunakuqala kukhuseleko lwendalo kunye nemozulu. IE expo China 2019, eyenzeka ngo-Epreli 15 ukuya ku-17 e-Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), ibonakalise oku ngokucacileyo. Ngexesha leentsuku ezintathu zomnyhadala, iindwendwe zorhwebo ezingama-73,097 ezivela kumazwe angama-58 nakwimimandla zibambe iintsingiselo kunye nezinto ezintsha zobugcisa kwicandelo lobuchwephesha bokusingqongileyo eAsia. IE expo China nayo yabona ukonyuka komboniso kunye nendawo yomgangatho: 2,047 umboniso umele indawo yokubonisa ye-150,000 yeemitha zesikwere (iiholo zemiboniso ezili-13 zizonke).
I-IE expo i-China 2020 iya kuqhubeka ukusuka nge-13-15 Agasti kwiziko i-Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) eShanghai, eya kuthi igubungele zonke iimarike ezinokubakho kwindawo engqongileyo:
Unyango lwaManzi noGutyulo
Ulawulo loNgcoliseko loMoya kunye nokuCocwa komoya